मन्त्रीको जवाफ नै चित्त बुझ्दैन सांसदलाई ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»पत्रपत्रिका»मन्त्रीको जवाफ नै चित्त बुझ्दैन सांसदलाई !
By रबि धिताल on २५ भाद्र २०७५, सोमबार ०१:०५ पत्रपत्रिका
काठमाडौं, भदौ २५ : जनताको चाहानालाई मुर्त रुप दिन बोलाइने संसदीय समितिलाई सांसदहरुले नै वेवास्ता गर्न थालेका छन् । संसद्को बैठकमा मात्र होइन समितिको बैठकमा पनि प्रायजसो शीर्ष नेताहरुको उपस्थिती प्राय सुन्य देखिन्छ । संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ भन्ने गरिएको भएपनि संसादहरुले समितिलाई वास्ता गर्न छाडेका छन ।संसदीय समितिमा दफावार छलफल भएपछि र सबैको सहमति भएपछि मात्र विधेयक संसदको बैठकमा लैजाने गरेको छ ।